ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် သူတို့ပြောစကား
*** ပန်းတိုင်ပျောက်နေပြီဖြစ်သော ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ ***
- နိုင်ငံတော်ရဲ. လွှတ်တော် ၊ အချုပ်အချာအာဏာနဲ.၀န်ကြီးဌာနအားလုံးကို
မောင်ပိုင်စီးထားတဲ. ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဟာ အခုတလော ပြည်သူတွေအပေါ်
(သမီးကလေးကျေးရွာ ကိစ္စအပါအ၀င် ) ရက်ရက်စက်စက်
လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကြောင်. ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ပြည်သူတွေကြား ဂုဏ်ယူမော်ကြွား
မဲဆွယ်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိဖို.ဆိုတာ (မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုရင်) မဖြစ်နိုင်တော.သလောက်ပါ။
....... အမှန်က လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ၊ သမ္မတ ၊ ကာ/ချုပ် .. မည်သူမဆို
ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဝင် အားလုံး ၊ တပ်မတော် အမတ်အားလုံး ဟာ
အထက်အမိန်.အတိုင်း လိုက်နာနေကြရတာပါ ။
ခုလိုအထက်အမိန်.အရ ကိုယ်ကျိုးဖက် မတရားမှု တွေ ဆက်တိုက်လုပ်လာလို.
ငါတို. ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ ရယ်လို. ဂုဏ်ယူမော်ကြွားတဲ.အသံတွေ တိတ်သွားပါတယ် ။
.. ၂၀၁၅ မှာ သူတို.ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ မအောင်မြင် နိုင်ဘူးဆိုတာ
ကြံ.ခိုင်ရေးအမတ်တွေကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောလာ ကြပါတယ် ။
*** ဒီလို အခြေအနေမှာ ၂၀၁၅ ခေတ်လွန်ကာလ ရော ၊ မတိုင်မီကာလမှာပါ
- ကြံ.ခိုင်ရေး ဘာလဲ ? ဘယ်လဲ ?
- မေးရတော.မှာပါ ။
သမ္မတ ကြီးပြောခဲ.တယ် ။
* မင်းသားကြီး မလုပ်ရလို. ပတ်မကြီး ထိုးဖေါက်မယ်.စိတ်မျိုးမမွေးကြနဲ. *
.. ပတ်မကြီးထိုးဖေါက် ၊ ၂၀၁၅ ပွဲဖျက်မဲ. သူဟာ ...
** ကြံ.ခိုင်ရေး ပါတီများ ** ဖြစ်လာခဲ.ရင် ........ ? ? ? /